ट्रम्पले भने -मैले गल्ती गरेकै छैन भने किन माफी माग्ने ? « Lokpath
ट्रम्पले भने -मैले गल्ती गरेकै छैन भने किन माफी माग्ने ?
वासिङ्टन – आफू ‘कानूनभन्दा माथि नभएको’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार बताउनुभएको छ ।
उहाँका वकील रूडी गिलानीले पनि अमेरिकी कानूनले राष्ट्रपतिलाई क्षमादान गर्ने शक्तिको व्यवस्था गरेको छ तर यो गर्र्दा ‘कठीन’ राजनीतिक जटिलता आउनसक्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,२५,शुक्रवार १५:२९
काठमाडौं । दक्षिण सुडानको जान्गेली राज्यमा भएको दुई जातिबीचको दंगामा परी कम्तीमा पनि ३२ जनाको ज्यान गएको छ । मंगलबार
काठमाडौं । आज भारतका लागि एतिहासिक दिन हो । भारतले आज ७३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । आजकै दिनदेखि
भारतको ७३औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै उनको सुस्वास्थ्य र सुखका साथै